ဓာတုစက်ရုံအတွက်စက်မှုအိတ် filter ကိုမြေမှုန့်ကိုဖယ်ရှား China Manufacturer
ဓာတုစက်ရုံအတွက်မြေမှုန့်ဖယ်ရှားရေး,ဓာတုစက်ရုံအတွက် Deduster,စက်မှု Bag အမျိုးအစားဖုန်ကောက်ခံရေး
Botou Hengrui Environmental Protection Equipment Co. Ltd. [Hebei,China] လုပ်ငန်းအမျိုးအစား: Manufacturer အဓိကစျေးကွက်များ: Worldwide ထုတ်ကုန်: 61% - 70% ဖေါ်ပြချက်: ဓာတုစက်ရုံအတွက်မြေမှုန့်ဖယ်ရှားရေး,ဓာတုစက်ရုံအတွက် Deduster,စက်မှု Bag အမျိုးအစားဖုန်ကောက်ခံရေး
Home > ထုတ်ကုန်များ > အိတ်အမျိုးအစားဖုန်ကောက်ခံရေးစီးရီး > အိတ်-type အမျိုးအစားဖုန်ဖယ်ရှားရေး > ဓာတုစက်ရုံအတွက်စက်မှုအိတ် filter ကိုမြေမှုန့်ကိုဖယ်ရှား
 ဓာတုစက်ရုံအတွက်စက်မှုအိတ် filter ကိုမြေမှုန့်ကိုဖယ်ရှား
ဆောက်လုပ်ရေးနှင့် DMC တစ်ခုတည်းသွေးခုန်နှုန်း deduster ၏အလုပ်လုပ်ကိုင်နိယာမ
တစ်ခုတည်းသောစက်အိတ်ဖုန်မှုန့်စုဆောင်း၏ 1. ဖွဲ့စည်းပုံ
ထောင့်ကွက်: အိတ်အခန်းထဲကစင်ကြယ်ဓာတ်ငွေ့ခန်းဖောက်ထား panel က, filter ကိုအိတ်, filter ကိုအိတ်အရိုးစု, ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုတံခါး, နှင့် box ကိုယျခန်ဓာကို, ဒီဇိုင်းကိုဆီးတားဗို့ 5000Pa အပါအဝငျ။
injection စနစ်က: အဓိကပိုက်, ပြောင်း, သွေးခုန်နှုန်းအဆို့ရှင်နှင့်ထိန်းချုပ်မှုတူရိယာအပါအဝငျ။
လေထုစားသုံးမှုနှင့်ပြာမှုန်ဥတုနှစ်ခုပုံစံများရှိပါတယ်: တဦးတည်းစံခါးပတ်ပြာရေပုံးအမျိုးအစားဖြစ်ပါသည်, အခြားဖွင့်အနားကွပ်အမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။
မြေမှုန့်ဓာတ်ငွေ့စားသုံးမှု port မှဒါမှမဟုတ် filter ကိုအိတ်စပွင့်လင်းအနားကွပ်ပါးစပ်ကနေတဆင့်ပြာရေပုံးသို့ ဝင်. ဖြစ်ပါတယ်။ မြေမှုန့်ဓာတ်ငွေ့ filter ကိုအိတ်မှတစ်ဆင့်ပိုက်ကွန်ဓာတ်ငွေ့ခနျးထဲသို့ filtered ဖြစ်ပါတယ်, ပြီးတော့လေထုသန့်စင်အခန်းထဲက၏အိပ်ဇောဆိပ်ကမ်းကိုမှတဆင့်ပန်ပန်ကာများကဆေးရုံကဆင်းသည်။ မြေမှုန့် filter ကိုအိတ်၏အပြင်ဘက်မျက်နှာပြင်မှပူးတွဲပါသည်နှင့်အိတ်ဖုန်မှုန့်စုဆောင်း၏ခုခံအဆက်မပြတ်မြင့်တက်လာခြင်းဖြစ်သည်။ အဆိုပါပစ္စည်းကိရိယာများမဟုတ် 1200Pa ထက်ပို၏ခုခံစေရန်အလို့ငှာ, အိတ်ဖုန်မှုန့်စုဆောင်းလုပ်ကိုင်ဖို့ဆက်လက်နိုင်ပြီး, မြေမှုန့်စုစည်းအိတ်ပေါ်တွင်ဖုန်မှုန့်ကိုမှန်မှန်သန့်စင်သင့်ပါတယ်။ အဆိုပါပြာသန့်ရှင်းရေးဓာတ်ငွေ့အထုပ်ထဲမှာချုံ့လေကြောင်း (0.5 ~ 0.7MPa) ဖြစ်စေခြင်းငှါသွေးခုန်နှုန်းအဆို့ရှင်ကိုစတင်ရန်အစီအစဉ်ကို Controller ကို၏အချိန်ကိုက် sequence ကိုတို့ကဖန်ဆင်းထားသည်နှင့် (ပထမလေတိုက်ခေါ်) လေထုဟာပြောင်းအပေါက် (နေဖြင့်သွေးဆောင်နေသည် ရုတ်တရက်လျင်မြန်စွာတိုးချဲ့များအတွက် filter ကိုအိတ်စနှစ်ခုလေတိုက်လို့ခေါ်တဲ့တဦးတည်းလေတိုက် () ဝန်းကျင်အကြိမ်ပေါင်းများစွာလေသွေးဆောင်ခြင်းနှင့်လေစီးဆင်းမှု၏ပြောင်းပြန်ဦးတည်ချက်တွေနဲ့မြေမှုန့်ကိုခါလိုက်ရန် venturi ပြွန်မှတဆင့်) ပထမလေတိုက်တောင်းဆိုခဲ့သည်။ ပြာရှင်းလင်းရေး၏ရည်ရွယ်ချက်အောင်မြင်ရန်ရန်။
installation နဲ့ maintation အတွက်လွယ်ကူသော 1) ရိုးရှင်းသောဖွဲ့စည်းပုံမှာ။
2) pneumatic အစိတ်အပိုင်းများ, လျှပ်စစ်အစိတ်အပိုင်းများနှင့်စစ်ဆင်ရေးအစိတ်အပိုင်းများအတွက်အဆင့်မြင့်ကမ္ဘာကျော်အမှတ်တံဆိပ်အစိတ်အပိုင်းများကိုချမှတ်။
4) တပ်ဆင်ခြင်းလျှပ်စစ် rotary အဆို့ရှင်, ပိုမိုတံဆိပ်ခတ်စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်ပိုပြီးထိရောက်မှု
5) PLC ထိန်းချုပ်ရေးနှင့်အလိုအလျောက်
ဆက်စပ်ထုတ်ကုန်များစာရင်း: ဓာတုစက်ရုံအတွက်မြေမှုန့်ဖယ်ရှားရေး , ဓာတုစက်ရုံအတွက် Deduster , စက်မှု Bag အမျိုးအစားဖုန်ကောက်ခံရေး , ဘိလပ်မြေစက်ရုံအတွက်မြေမှုန့်ဖယ်ရှားရေး , မိုင်းစက်ရုံအတွက်မြေမှုန့်ဖယ်ရှားရေးကိရိယာ , ဘိလပ်မြေစက်ရုံအတွက်မြေမှုန့်စုဆောင်းခြင်းကေ့ , XD-II ကိုဘက်စုံပိုက်ဆိုင်ကလုန်းဖုန်ဖယ်ရှားရေး , အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲဖုန်ဖယ်ရှားရေးစနစ်